Akụkọ - Ntu ọka
Ntụ ọka na-ebu ihe eji ebu ihe
Na igwe ọka, a na-ejikarị ndị na-ebugharị ihe na-ebugharị ihe. Ha na-ebughari igwe nke na-adabere na ntughari na-agbaghari iji mee ka ihe di iche iche di iche iche ma obu ihe ndi ozo.
TLSS usoro ịghasa ebu nwere àgwà nke mfe Ọdịdị, kọmpat, a pụrụ ịdabere na ime ihe, adaba mmezi, mma akara, nwere ike nri ma ọ bụ ebutu n'elu dum na-arụ ọrụ ogologo, na ike ga-ebu ya ụzọ abụọ na otu casing. Kwesịrị ekwesị maka ịbuga ihe ndị na-ekpo ntụ na ihe ndị granular.
TLSS usoro ịghasa ebu na-tumadi mejupụtara nke ịghasa aro, igwe oghere, nghọta amị na nnyefe ngwaọrụ. A na-eji eriri na mkpịsị aka ya na-emegharị ahụ dị gburugburu. Ogwe nnyefe na-arụ ọrụ bụ ọkpọ ígwè na-enweghị nchara. Enwere ike ịtọ ogologo iru dika ịchọrọ.
Igwe nrụpụta ihe maka igwe ihe ntụ ọka
A na-ejikarị FSLZ usoro Impact Detacher eme ihe dị ka ihe mgbakwunye na mgbakwunye na sistemụ ntụ ọka iji metụta ihe ndị ahụ ịtọpụ ntụ ọka ahụ wee mee ka ọnụọgụ sieve.
The igwe na-tumadi ekewet ndepụta oriri, stator disk, rotor disk, casing, moto na akụkụ ndị ọzọ. A na-etinye ntinye ahụ na ntanetị dị mkpa nke casing ma jikọọ ya na pipeline na-ebugharị ikuku. Ihe a na - abanye site na ntanetị nke akụrụngwa ma daa na nnukwu rotor rotor disk. N'ihi ike nke etiti, ihe na-eme ihe ike n'etiti stator na rotor pin. Mgbe mmetụta gasịrị, a ga-atụba ya na mgbidi shei ahụ, a na-agbaji flakes n'ihi mmetụta siri ike, ma fesa ya na ikuku ikuku na shei ahụ na ọdụ ụgbọ mmiri iji mezue usoro ịtọghe ntụ ọka.
Sachapụ na ntụ ọka
Ihe nhicha bụ ihe dị mkpa na igwe eji egweri ntụ ọka. Ọ na - eji ijikọ ọnụ nke sie sie ike na ikuku na - enyocha ntụ ọka.
Ihe eji eri nri na-eji mkpọtụ nke ngwa nri eme ka ihe ahụ kpuchie obosara dum. Na-adabere na vibration nke ahụ ihuenyo ahụ, ihe ahụ na-aga n'ihu ma na-edozi ya site na ihuenyo elu ma kesaa na ihuenyo atọ. N'okpuru ikpokọta edinam nke vibration na ikuku eruba, ihe na-nkewa na layered dị ka ndị dị iche iche urughuru size, kpọmkwem nnukwu mpo na nkwusioru ọsọ.
N'oge ntụ ọka na-eme ka mkpocha ntụ, ikuku ikuku na-adịghị mma na-agabiga na ngwongwo ihe, na-a graụ nsị nke obere ike ndọda, a na-eme ka ihe ndị buru ibu na-aga n'ihu na ọdụ nke ihuenyo ahụ, obere ahụ na-ada na ihuenyo, na ihe na-agafe na ihuenyo a na-achịkọta Na ngwongwo na-ebugharị tank, ihe dị iche iche dị iche iche na-adọrọ adọrọ gafere site na ngwongwo na-ebugharị na ihe na-agbapụta ihe, ma na-agbanye ka ihe usoro a chọrọ.